कच्चा फोस्रोसेटेम पाउडर (110958-19-5) hplc≥98% | AASraw नोट्रोपिक्स
/ उत्पादन / नोट्रोपिक्स पाउडर / Fasoracetam पाउडर
SKU: 110958-19-5. श्रेणी: नोट्रोपिक्स पाउडर
AASraw ग्याँसबाट साम्राज्य र उत्पादन क्षमतासँग फसोरकोटिम पाउडर (110958-19-5) ठूलो मात्रामा, सीजीएमपी विनियमन र ट्र्याकिबल गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत छ।
Fasoracetam पाउडर स्वादमा धेरै कचौरा छ, जो बेईज बोररहित पाउडरको सेतो हो। यो piracetam भन्दा बढी विरोधी amnesiac छ, र एक केन्द्रिय तंत्रिका प्रणाली उत्तेजना को रूप मा कार्य गर्दछ। यो एक उच्च-आलोचना कोलोनी uptake वृद्धि हो र मस्तिष्क कोर्टेक्स मा नाइट्रिक ओक्साइड संश्लेषण गतिविधि बढ्छ। Piracetam को समान, प्राणिरिक्टेम को स्मृति समेकन प्रभाव एड्रेनालटेक्मी द्वारा समाप्त गरिन सक्छ।
Fasoracetam पाउडर भिडियो
Fasoracetam पाउडर आधारभूत क्यारेक्टरहरू
नाम: Fasoracetam पाउडर
आणविक सूत्र: C14H27N3O2
पिघल प्वाइन्ट: 160-166 ° C
भण्डारण अस्थायी: कोठाको कोठा वा कूलरमा भण्डार गर्नुहोस्
मस्तिष्क को बढावा उपयोग मा कच्चे फोस्रोसेटेम पाउडर पाउडर
फसोरकोटेम पाउडर लैम एक्सएनक्सक्स, एनएफसी-एक्सएनएक्स, एन एस एक्सएनमक्सको रूपमा व्यापारको नाम हो।
कच्चा फसोरैटेम पाउडर प्रयोग
यस छिटो, आधुनिक, आधुनिक संसारमा मानिसहरूमा रोजगारको लगभग कुनै क्षेत्रमा दक्षताका लागि उनीहरूको खुट्टा र बहु-कार्यमा छिटो सोच्ने क्षमतामा रहेको एक मांग हो; मेडिकल प्रोफेसरबाट न्यूनतम वेतन खाना सेवा कार्यकर्तामा। यो जारी राख्न, प्रतिस्पर्धा र प्राप्त गर्न आवश्यक छ देश भर मा कलेज परिसर मा प्रतिबिंबित। उच्चतम ग्रेड प्राप्त गर्न र उत्तम कागजातहरू लेख्नु आवश्यक छ; सबै पछि, यो आधुनिक अमेरिका मा प्रतिस्पर्धा गर्ने एकमात्र तरिका हो। विद्यार्थीहरू, व्यवसायिकहरू र समान व्यक्तिहरू सबैले तिनीहरूको प्रदर्शनमा सुधार गर्न चाहन सक्छन्। नोट्रोपिक्स औषधिको परिवार हो जसले धेरै ध्यान पाएको छ र लोकप्रिय प्रयोगको ठूलो सम्झौता देखाउँदछ। औषधि मध्ये प्रत्येक को रूप मा जानिन्छ, रेसेटम परिवार, सबै प्रारंभिक नोटोप्रो, पिरासिटाम देखि व्युत्पन्न हो। यी ड्रगहरू मेमोरी र मानसिक तीव्रता बढाउन काम गर्दछ, एक तरिका वा अर्कोमा, जसले तिनीहरूलाई कलेजको विद्यार्थीहरूमा धेरै लोकप्रिय बनाएको छ। हालै, नोट्रोटिकको एक नोट फासोरोसिटेम पाउडर, वा यसको उचित नाम "5 - [(piperidin-1-YL) कार्बोनील] पिरालोडिडिन-एक्सएनएमक्स-एक" भएको छ, जुन मुखमा (राजगनापती र एट अल) हुन्छ। , 2)। यो विशेष racetam, फसोरकोटेम पाउडरको रुपमा चिनिन्छ, साबित हुन्छ कि साबित हुन्छ।
मानिसहरूको लागि फसोरकोटिम पाउडरको कुनै मानकीकृत खुराक छैन। अज्ञात प्रमाणहरूले 10 - 15 मिलीग्राम वरपरको सानो मात्रामा 30-50 मिलीग्राम प्रति दिन तीन पटक सेवा गरिरहेका ठूला खुट्टाहरूसँग सानो डाइरेस्टहरूको सुझाव दिन्छ।
फसोरकोटिम पाउडरको फाइदा धेरैजसो बेवकूफमा छन्, तर सम्बन्धलाई सुझाव दिन केही अध्ययनहरू छन्। एम्फाफेमाइन एडीएचडी औषधि प्रयोग गरी लाखौं बालबालिका र किशोरहरू छन् भनेर, त्यहाँ फासेरासिटाम प्रभाव परीक्षण अध्ययन राम्रो चिन्ह हो। अझ राम्रो, फसोरकोटेम पाउडरले यसलाई नैदानिक ​​परीक्षणहरूको दोस्रो चरण र तेस्रो चरण बनाएको छ, जसले यस उद्देश्यको लागि उच्च प्रभावकारीता प्रदान गर्न सक्छ। जून 2016 को रूपमा, यो औषधि अझै पनि यी परीक्षणहरूमा थियो।
फसोरकोटिम कच्चा पाउडर फाइदाका आधारमा सबूत अनुसार, एकाग्रता र उत्तेजना लाभहरू मध्यस्थ छन्। एक व्यक्ति नेप्प्पेट को उत्तेजना प्रभाव को तुलना गरे र अर्को भन्यो कि यो उत्तेजना को तुलना मा ऊर्जा को बढावा को अधिक थियो।
यी फोकस र एकाग्रता सम्बन्धित फायदाहरूको बीचमा, त्यहाँ न्यूरोप्रोटोफेक्चर प्रभावहरूको पनि प्रमाण छ। एक चूहा अध्ययनले देखाएको छ कि फसरोकाटिम कच्चा पाउडर मेमोरी अवरोध रोक्न सक्छ। यो ड्रग्सको रीसेटम लाइनको बीचमा सामान्य छ र फसोरकोटिम पाउडरले यी गुणहरूको धेरै प्रदर्शन गर्नेछ भनेर बुझ्छ।
फसोरकोटिम पाउडरको अर्को रोचक लाभ एक एंटीडेन्ट्रेन्ट्ट र एक्सीइलोटिकको रूपमा हो। सिकेको असहायता संग चूहों को एक अध्ययन ले दिखाए कि दबाइ को केहि साइड इफेक्ट्स (जस्तै एमओओ इंटरैक्शन) को बिना शक्तिशाली एंटीडेपेन्टेंट प्रभाव थियो। यो अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ कि GABA (बी) माथिको विनियम जनावरहरूमा परीक्षा परिणामहरू बढ्न सकेको थियो।
फासोरोराटेमम कच्चा पाउडर साइड इफेक्टमा चेतावनी
त्यहाँ अहिले वैज्ञानिक साहित्यमा कच्चे फेसोरासिटेम पाउडरको कुनै ज्ञात साइड इफेक्टहरू छैनन्, तर यसको मतलब यो जोखिमबाट मुक्त छैन। न केवल कुनै पनि कृत्रिम औषधीय जोखिम जोखिममा आउँदछ, तर स्मार्ट दबाइ समुदायमा अनौठो प्रमाणले हामीलाई औषधीको बारेमा केहि कुरा बताउन सक्छ।
एकको लागि, केही पूर्वनिर्धारित रिपोर्टहरूले orgasms मा कमी सुझाव दिन्छ। एक विशिष्ट व्यक्तिले यस प्रभावलाई उद्धृत गरेको छ, तर दुर्लभ देखिन्छ र शायद अन्य चरको साथ भंग भयो।
लामो समयमा नोट्रोपिक प्रयोगकर्ताहरूले कच्चा फसोरकोटिम पाउडरलाई एक मजाक भनिन्छ (त्यहाँ हरेक महिना एक नयाँ जारी देखिन्छ), तर यो एक नयाँ सिंथेटिक यौगिक हो जुन racetam परिवारको भाग हो। 1960s मा सिंथेसाइज गरिएको छ, पिरासिटाम परिवारको पहिलो थियो र बजारमा अधिक प्रसिद्ध नोट्रोपिक ड्रग्स जारी रह्यो।
कच्चा फसरोकाटेम पाउडरका फाइदाहरू प्रायः अनैतिक छन्, तर दावीहरू जगेडा गर्न केही प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि छन्। लिखित रूपमा, फासोरोकाटिम पाउडर चरण2/ III क्लिनिकल परीक्षणहरूमा ध्यान खरिद हाइपरक्टिविटी विकार (ADHD )का लागि परीक्षण गरिएको छ ।
अन्य चिल्लो लाभहरू मेमोरी सुरक्षा  सँग सम्बन्धित छन् जुन सामान्यतया racetam परिवार भित्र हो। त्यहाँ चिन्ता र मूड सम्बन्धी फाइदाहरू पनि छन् जुन मस्तिष्कमा GABA उत्पादनमा असरहरू हुन सक्छ । यद्यपि सबूत दुर्लभ छ र निर्णायक छैन, त्यहाँ धेरै मानसिक जानकारी हो कि यो सामान्य मानसिक प्रदर्शनको लागि प्रभावकारी नोटोप्रो हुन सक्छ।
अध्ययनले देखाउँछ कि प्रिमिरसिटिमले:
अनाज रक्त प्रवाह बढाउनुहोस्
दीर्घकालीन मेमोरी र स्थानिय शिक्षा सुधार गर्नुहोस्
उच्च आत्विकता कोलेन uptake बढाउनुहोस्
मस्तिष्क कोर्टेक्समा नाइट्रिक अक्साइड संश्लेषण बढाउनुहोस्
एनेमियाक ड्रग्स को प्रभाव को कम गर्नुहोस
FASORACETAM पाउडर के हो?
फसोरकोटेम पाउडर नोट्रोपिक्सको रीसेटाम परिवारमा एक नोटोपिक कम्पाउन्ड हो। Racetams विभिन्न यौगिहरुको एक ठूलो समूह, सबै मार्जिन यौगिक Piracetam देखि परिमार्जित, जो 1960s मा खोजिएको थियो। फसोरकोटेमको रासायनिक ढाँचा हो: (5R) -5- (पाइपिडिने-एक्सएनएक्स-कार्बोनील) पिरालोडिन-एक्सएनएमएक्स-एक।
फसोरकोटिमले तनाव र मूडको स्तर सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
FASORACETAM पाउडर कार्य गर्दछ कसरी?
Fasoracetam पाउडर मस्तिष्कमा रिसेप्टरहरू परिमार्जन गरेर काम गर्छ। यो cholinergic, GABA र glutamate रिसेप्टर्स मा काम गर्दछ, जो सबै नयाँ सम्झनाहरु को निर्माण र भंडारण मा एक भूमिका निभाते हो। अधिकांश नियोट्रोपिक यौगिकहरू र सोसाइटी रेकेमेन्टहरू जस्तै, फासोरासिटेम पाउडरले मस्तिष्कलाई नरम संज्ञानात्मक फाइदा ल्याउन असर गर्छ।
अज्ञात प्रमाण र अनुसन्धानले बताउँछ कि फसोरोकाटिम पाउडर मेमोरी र फोकस सुधार गर्न, तनाव सुधार गर्न, मूड बढाउने, र प्रेरणा र मानसिक स्पष्टता बढाएर विलम्ब गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ। प्रयोगकर्ताहरू जसले फासोरोकाटिम पाउडरलाई थप गरेन भनेर रिपोर्ट गर्न, अधिक कुशलतापूर्वक सिक्ने र सक्षम पार्दा शान्त स्थिति बनाए।
Fasoracetam कच्चे पाउडर
कच्चा फसोरैटेम पाउडर मार्केटिंग
AASraw बाट Fasoracetam पाउडर कसरी खरीद